Ndị Uwe Ojii Anambra Ejidela Ndì Òtu Nzuzo 85 Na Onye Uwe Ojii Adigboloja...
Igbo sị na ọ na-adị mma a gbaa bute, a kwachie, chere ọzọ; ma sịkwa na a naghị aka àkà eje nta agwọ, kama na ọ bụ agwọ pụta, a chụba ya.
A kpọkuola Ndị Igbo Ka Ha Jidesie Omenala Ha Ike...
Igbo sị na ọ na-abụ ịkpọ ngwere emeghị ihe o jiri bụrụ ịkpọ ngwere, ụmụaka ewere ya mere anụ n'udummiri na ọkọchị.
Omenala: Ndị Enugwu-Ukwu Emeela Emume Isu Evo...
Ịma mma nke ọnatarachi ndị Igbo na ọdịbendi bụ nnọọ nke pụtara ìhè nso-nso a, dịka ndị obodo Enugwu-Ukwu dị n'okpuru ọchịchị Njikọka nke steeti Anambra merùbèrè emume Isu Evo, bụ otu n'ime omenala pụrụ iche e ji mara obodo ahụ.
A Dụọla Ndị Ntorobịa Ka Ha Tinye Aka n'Ịkwalite Ezi Nchekwa...
N'ịgbaso okwu Igbo ahụ sị na otu onye anaghị achụ ngwere mgbahige aja, a dụọla ma kpọkuo ndị ntorobịa na steeti Anambra ka ha sonye n'amụma ịkwalite ezi ọnọdụ nchekwa tọrọ àtọ na steeti ahụ.
ASCSDA: Ndiowu Enwetala Ego Ịmalite Ọrụ Ụlọ Obibi Ndị Ji Otu Ahọ Efe Ala Nna Anyị...
Igbo sị na ọ na-aka mma ibu ụzọ maba ọkwà mmiri tupu òzùzò ya, maka na agha a kàrà àkà adịghị eri ngọwọrọ. Ka ọ dị taa, gọọmenti steeti Anambra eburula amụmà inye nkuzi ya wee gaa n'Ọdekpe dị n'okpuru ọchịchị Ọgbaru, iji kọwaara ma nyekwa ọzụzụ banyere ihe dị iche-iche ha kwèsìrì ịma na ime na nkwadobe maka ìjú mmiri nke a na-atụ anya na ọ ghaghị ịgba na mpaghara ahụ n'ahọ a dịka ọ na-eme na mbụ.
Gọọmenti Anambra Amalitela Ịkọchàsị Ọwà Mmiri Sụchiri Asụchi
N'ịga n'ihu ịhụ na e nwere ezi ọnọdụ gbùrùgburu bụ ịgbà na steeti Anambra, gọọmenti steeti ahụ amalitela ịkọchàsị na ịsụghèsì ọwà mmiri dị iche-iche mere nsụchi na steeti ahụ, site n'okpurù atụmatụ adịmọcha a kpọrọ 'Dobe Anambra Ọcha'.
Onyeisi Uwe Ojii n'Anambra Arịọ Njikọ Aka Ndị Nta Akụkọ
Igbo sị na otu onye anaghị achụ ngwèrè mgbahige aja, maka na ọ na-abụ e jikọọ aka buo ozu enyi, ọ dị mfe. Ọ bụ nke a mèrè onyeisi ndị uwe ojii ahụ e wètàrà ọhụụ na steeti Anambra, bụ maazị John Abang jìrì wee rịọ njikọ aka nke ndị uwe ojii na ndị nta akụkọ na ya bụ steeti n'ọrụ ịkwàlite ezi ọnọdụ nchekwa.
Buharị Ezigara Ndị Sineeti Aha Ndị A Ga-Akpọlite n'Ọkwa Minista
Igbo sị na ihe ọ sọkwara sị bùgharịba ozu dike, na ọ ga-erurịrị ílì aka ma e mechaa. N'ịgbasò okwu amamihe a, ya bụ ahà ndị ga-eji ọkwa minista na ngalaba ụlọ ọrụ dịgasị iche-iche nke ala anyị n'ọchịchị àgba nke abụọ nke onyeisi ala bụ Muhammadụ Buharị, bụ nke a tụbàrà anya ya kemgbe ụwa, eruola ndị ụlọ omebe iwu sineeti ala anyị aka.
Onyeisi Ndị Uwe Ojii Ọhụụ Awụchaala Na Steeti Anambra
Igbo sị na ọ na-adị mma a sụgide ụtàrà e hogharịa ọdụ. O wee bụrụ ya, na ka ọ dị taa, onyeisi ndị uwe ojii ọhụụ, bụ Maazị John B. Abang awụchaala na steeti Anambra dịka onyeisi ndị uwe ojii nke iri na asatọ steeti ahụ nwègòrò.
A sị na ọ naghị adị mma onye búrú ọrụ ényí n'isi, o were ọkpà na-abọ mbụzụ, maka na o nweghị úrù anụ mbụzụ ga-abara ya karịrị mpàtà ọrụ enyi o bù n'isi. Nke ahụ wee bụrụ okwu. Ọ bụkwa n'ịgbasò ya bụ okwu ka e jìrì kpọkuo ma dụọ ndị otu Christ ka ha jidesie nzọpụta ha na okwùkwè ha na Chineke ike, mà lechàpụrụ ihe efu nke ụwa ọjọọ a na agụụ nke anụ anya, maka na ihe ọbụla nwèrè ụgwọ so ya.
Gọọmenti Anambra Ekwenwòó Nkwa Ezi Ọnọdụ Maka Mwunye Akụnụba
Gọọmenti steeti Anambra, site n'ọnụ aka na-achị ya bụ steeti, bụ gọvanọ Willie Obianọ ekwenwòóla nkwà ịhụ na a gàrà n'ihu n'inwe ezi ọnọdụ dị larịị maka ndị na-ewunye akụnụba na azụmahịa na steeti ahụ.